တိုက်ပွဲကြောင့် နက်ရှိုင်းတဲ့ရင်းနှီးမှုတွေရစေခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲ ? - JAPO Japanese News
ကြာ 21 May 2020, 9:17 မနက်
1863ခုနှစ်၊ Satsuma မျိုးနွယ်စုတွေဟာ (Satsumahan) ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ၃ ရက်ကြာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် တူညီတဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တိုက်ခြင်းကြောင့် ပိုနက်ရှိုင်းလာတာ ဆက်ဆံရေး၊ အဲဒီကနေ ဂျပန်အတွက် ပြောင်းလဲစေတဲ့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်တုန်းက အရမ်းအင်အားကြီးတဲ့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ သေးငယ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊
ဂျပန်ဟာသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်တင်မဟုတ်ခဲ့၊ သေးငယ်တဲ့ ဒီ စီရင်စုလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘယ်လို များ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲ ?
ဒီစစ်ပွဲအကြောင်းကို မပြောခင် အဲဒီအချိန်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ပြောချင်ပါတယ်။
အဲတုန်းက ဆာမူရိုင်းခေတ်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်သည် နိုင်ငံများစွာနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံဖလှယ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသည့် Sakoku လို့ခေါ်တဲ့ တံခါးပိတ်မူဝါဒရှိပါတယ်။ထိုမူဝါဒထဲတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာစတင်ရောက်ရှိလာခြင်း အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်ကျူးကျော်မှုကို တားဆီးပေးတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ထိုအချိန်က နိုင်ငံအများစု ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကိုလိုနီမူဝါဒများကို တု့န်ပြန်ရန်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဝါဒတွေဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိစီရင်စုများမှာ နိုင်ငံငယ်များအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဆိုတာရှိပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးကို အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ Tokugawa မိသားစု ဦး ဆောင်တဲ့ Edo Shogunate (အစိုးရ) ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် Edo Shogunate ရဲ့ အင်အားက အားနည်းလာပြီး ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှု ခက်ခဲလာနေစဉ်
နိုင်ငံရပ်ခြားမှ စ၍ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့် ဖွင့်လှစ်ရန် ဖိအားပေးမှုများကြုံရပြီး နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်သို့စတင်ဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။
အဲဒီ အတောအတွင်းမှာ လက်ရှိ Kagoshima စီရင်စုတွင်တည်ရှိတဲ့ Satsuma တို့နှင့်အတူ အင်္ဂလန်အကြား ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားမှု စတင်လာပါတယ်။Namamugijien ကို လက်ရှိ Yokohama မြို့ Kanagawa စီရင်စုတွင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Satsuma လူမျိုးစုရဲ့ ပဒေသရာဇ်သခင် စီတန်းလှည့်လည်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဗြိတိသျှလူမျိုးက မြင်းစီးလျက် ကြားဖြတ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူမျိုးကို ဂျပန်မှာ ခွင့်မပြုပါဘူး။
သူနှင့်အတူလိုက်ပါလာတဲ့ ဆာမူရိုင်းက ဗြိတိသျှလူမျိုးကို သတ်ဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်ကသေဆုံးသွားကာ ၊၂ ယောက်ကတော့ ပြင်းထန်တဲ့ဒါဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
Satsuma လူမျိုးစုရဲ့ ပဒေသရာဇ်သခင် စီတန်းလှည့်လည် ဖြတ်သန်းသွားမည်ကို ကြိုတင်အသိပေးထားခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့က ၎င်းကြေငြာခြင်းကို လျစ်လျူရှုခဲ့ရာမှ ဒီပြဿနာက စတင်ဖြစ်ပွားတာပါ။ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်ဘက် က ဒီကိစ္စကို ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး တရားဝင်တောင်းပန်မှုနှင့်အတူ Edo Shogunate ထံမှ ‌ပေါင် £ 100,000 အထိ လျော်ကြေးပမာဏကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် Satsuma လူမျိုးစုတို့အဘို့၊
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ပြစ်ဒဏ် ပေါင် ၂၅၀၀၀ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်က Edo Shogunate ဟာ ငွေရေးကြေးရေးမလုံလောက်ခဲ့ပေမယ့် တောင်းပန်မှုနှင့် လျော်ကြေးပေးခြင်းငွေများကို လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Satsuma တို့က ဒီညွှန်ကြားချက်များကို လုံးဝမလိုက်နာခဲ့ပါဘူး။သူဟာ Satsuma အတွက်မှန်ကန်ရာလုပ်ခဲ့တာမို့လို့ တောင်းပန်စရာလုံးဝမလိုဘူးလို့ လည်း ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဗြိတိသျှတို့ စစ်သင်္ဘောခုနစ်စင်းကို Kagoshima ပင်လယ်အော်သို့ လွှတ်ကာ ချီတက်လာပါတော့တယ်။
Satsuma တို့ တတ်နိုင်သမျှပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ တည်နေရာ ၇နေရာမှာ တိုက်ခိုက်ဖို့ သတ်မှတ်ပြီး
အဲဒီနောက် ဗြိတိသျှသင်္ဘောတစ်စီးဟာ ချုံးချုံးကျသွားပြီး သင်္ဘောနှစ်စင်းကို ဆက်တိုက်ခိုက်လို့မရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အခါမှာတော့ တပ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာ ဗြိတိသျှယူအတွက် လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ အရာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး လျော်ကြေး ပေါင် £ 25,000 ကို Edo Shogunate ကချေးငွေအနေနဲ့ Satsuma ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။
Namamugi ရာဇ၀တ်သားကတော့ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။Satsuma ဘက်မှ Edo Shogunate မှချေးထားသောငွေကိုပြန်မပေးပဲ Namamugi အဖြစ်အပျက်၏ ရာဇဝတ်သားဟာ ထွက်ပြေးရာမှ သေဆုံးခဲ့ပြီး အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို ဖြေရှင်းလို့ရသွားပါတယ်။Namamugi အမှု၏ပြစ်မှုသည် Satsuma ဘက်မှကြည့်ရင်တော့ ရာဇဝတ်သားမဟုတ်ပါဘူး။
ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်သူသည် Satsuma ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်သောသူရဲကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်သောသူရဲကောင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ရလဒ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက် Satsuma နှင့်ဗြိတိန်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အလျင်အမြန်နီးကပ်လာပါတယ်။Satsuma က ဗြိတိသျှတို့အား လွှမ်းမိုးမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှဘက်မှာတော့ ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တစ်ခါမှမကြုံဖူးလို့
သူတို့ဟာ Satsuma ကို တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေစတင်လာပါတယ်။ထို့နောက် Satsuma က အင်္ဂလန်မှ စစ်သင်္ဘောများ၀ယ်ယူရေးအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်လာပါတယ်။
ဒါကတော့ အဲဒိုအစိုးရအနေနဲ့ ကတော့ မသိပါဘူး။ဗြိတိန်အနေနဲ့ကတော့ Satsuma ကြောင့် ဂျပန်ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ သေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်မြင်စေပြီး၊
တစ်ဖန် သူတို့အတွက် ကောင်းသောစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ဖြစ်လာပြီးတော့ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ပိုမိုနက်ရှိုင်းလို့လာပါတယ်။
ပြီးတော့ ဗြိတိသျှတွေက သူတို့ရဲ့စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ကူညီပေးကြပြီး အဆိုပါ Edo Shogunate ကို အနိုင်ယူကာ
ခေတ်သစ်အနေနဲ့ Meiji အစိုးရသစ် ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
စစ်ပွဲအတွင်းမှာ သေတဲ့သူ၊ ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကို တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ဘက်က
၁ ယောက်သေ ၉ ယောက်ဒဏ်ရာရဗြိတိသျှဘက်က
၁၃ ယောက်သေ ၊ ၅၀ ဒဏ်ရာရပြီး ဒဏ်ရာရသူထဲက ၇ ဦး သေ။
လူတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ ဘယ်လို စစ်အခြေအနေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါဟာ ကောင်းသောအရာမဟုတ်သော်လည်း နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးကို ရရှိပြီး
ခေတ်သစ်တစ်ခုဖန်တီးရန် အစပျိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုကဲ့သို့သော စစ်ပွဲတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
Shimadzu ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ အားသားချက် !!!!
Ninja Temple လို့တင်စားကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ထောင်ချောက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း !!!
ဂျပန်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ စျေးကြီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဘာရန်ငြိုးမှမရှိဘဲ အိမ်သာထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
Virtual idol နဲ့အရက်အတူတူသောက်နိုင်တဲ့ခေတ်
ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ passport အသစ်က ??
Maiko + otaku က ကျိုတိုမြို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီလား ! ?